Muqdisho Oo Laga Mamnuucay Shirarka Ka Dhanka Ah Dowlada - Awdinle Online
Muqdisho Oo Laga Mamnuucay Shirarka Ka Dhanka Ah Dowlada
Dowladda Fedraalka Soomaaliya ayaa soo saartay amar si hoose loola wadaagay hay’adaha amaanka ee dowladda Soomaaliya iyo maamulada degmooyinka gobalka banaadir .
Masuuliyiinta degmooyinka gobalka iyo talisyada ciidamada ayaa lagu wargeliyay in ay joojiyaan dhamaan shirarka ka dhanka ah dowladda .
Idaacado iyo Telefishino ka howlgaladda magaalada Muqdisho ayaa laga joojiyay baahinta muuqaalo looga hadlayo xaaladda dalka ee siyaasadda iyo amaanka. Muuqaalada la joojiyay ayaa ahaa VOX-POP (Aragtida dadweynaha).
The Village oo aheyd goob kulmisa weriyaasha iyo siyaasiinta isugu jira mucaarad iyo muxaafad ayaa loo keenay Warqad waxaana lagy wargeliyay in maqaayadda la xiri doono, hadik ay ka dhacan shir aysan dowladdu ka warqabin.
Hoteelo iyo maqaayado kale oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale looga digay in xarumahooda ka dhacaan shirar dowladda lagu mucaaridaayo .
Previous articleEx xildhiban Aways Oo Baydhabo Ku Soo Bandhigi Doono Buug Cusub
Next articleQarax lagu dilay askar boolis ah oo caawa ka dhacay duleedka Muqdisho